Sina Taratasy fahatelo dia mahita ny varotra vahiny manitatra mpanamboatra sy mpamatsy | Tspringwater
Ny telovolana fahatelo dia mihanaka ny varotra ivelany
Ny varotra raharaham-bahiny any Shina dia nivelatra tamin'ny telovolana fahatelo ka hatramin'ny avo indrindra, nahatonga ny fitomboan'ny fanondranana sy ny fanafarana isan-taona niova hatrany amin'ny ratsy hatrany amin'ny lafy tsara, hoy ny angon-drakitra.
Ny fitomboan'ny lohateny fanondranana eo amin'ny dolara dia nitombo hatrany amin'ny 9,9 isan-jato taona tamin'ny volana septambra teo 9.5 isan-jato tamin'ny volana aogositra, nanamarihana ny volana fahenina nisesy ny tarehimarika fanondranana raha oharina amin'ny vinavinan'ny tsena.
Nandritra izany fotoana izany, ny imports dia nitombo 13,2 isan-jato tamin'ny taona teo aloha, namadika ny fihenan'ny 2,1 isan-taona isan-taona tamin'ny volana Aogositra, ambony lavitra noho ny nandrasana tamin'ny tsena ary nanenjana ny ambim-bolan'ny varotra lohateny ho $ 37 miliara tamin'ny volana septambra tamin'ny 58,9 miliara dolara amerikana tamin'ny volana aogositra.
Ny fahamafisan'i Sina amin'ny fanondranana dia nateraky ny satan'izy ireo ho toekarena voalohany ary ny voalohany nivoaka tamin'ny valanaretina COVID-19, izay nanampy tamin'ny fitomboan'ny fanondranana ny PPE (fitaovam-piarovana manokana) sy ireo vokatra miasa / fianarana-avy-trano , raha mbola voarohirohy tamin'ny areti-mandringana ny mpifaninana, hoy ny orinasan-tserasera Nomura.
"Ny fitomboan'ny fanondranana any Shina dia mety hiakatra mandritra ny roa volana maromaro noho ny onjan'ny COVID-19 miverimberina any ivelany," hoy i Lu Ting, sefom-pisoloan'ny Sinoa ao Nomura. "Etsy ankilany, ny fanatsarana ny fitomboan'ny import amin'ny ankamaroan'ny entana lehibe indrindra amin'ny volavolan-tsolika amin'ny volana septambra dia mitaky fitomboan'ny fangatahana ao an-trano sy famerenana amin'ny laoniny."
Goldman Sachs dia manantena ihany koa fa ny herin'ny fanondranana dia hitohy mandritra ny volana ho avy ary ireo fanafarana entana dia mety hitohy hitatra amin'ny ambadiky ny fanarenana hatrany amin'ny asa an-trano.
Tamin'ny telovolana telo voalohany tamin'ny taona 2020, ny varotra ivelany ankapobeny dia nitombo 0,7 isan-jato isan-taona ka hatramin'ny 23,12 trillion yuan (3,43 dolara amerikana), miaraka amin'ny fanondranana miakatra hatramin'ny 12,71 trillion yuan, fiakarana 1,8 isan-jato tamin'ny taona teo aloha, raha ny fanafarana nilentika 0,6 isan-jato ho 10,41 trillion yuan, hoy ny fitantanan-draharaha ankapobeny ny ladoany tamin'ny talata.
"Manoloana ny fiatraikany mahery vaika amin'ny valan'aretina COVID-19, nanamafy ny valiny politika i Shina, nanao ezaka mafy hiantohana ny fitoniana amin'ny lafiny enina sy ny filaminana amin'ny faritra enina," hoy i Li Kuiwen, talen'ny departemantan'ny statistikan'ny fadin-tseranana.
"Nahavita zava-bita lehibe izahay tamin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ankapobeny ny areti-mandringana sy ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy, ary nitohy niseho ny vokatry ny politika amin'ny fametrahana ny varotra ivelany, miaraka amin'ny fanafarana entana sy fanondranana aondrana lavitra noho ny nampoizina," hoy i Li.
Taorian'ny niainany ny fahatairana tamin'ny telovolana voalohany, dia tafarina tamin'ny vanim-potoana avrily-jona ny fanafarana entana na fanondranana na dia mbola nandatsaka fidinana kely aza isan-taona.
Tamin'ny telovolana fahatelo, ny hetra ara-barotra any ivelany an'i Shina dia nahatratra 8,88 trillion yuan, nitombo 7,5 isan-jato isan-taona, anisan'izany ny fanondranana dia nitombo 10,2 isan-jato hatramin'ny 5 trillion yuan ary nandroso 4,3 isan-jato hatramin'ny 3,88 trillion yuan. Ireo tarehimarika telo ireo dia avo lenta nandritra ny telovolana.
Ny Fikambanan'ny Firenena Azia atsimo atsinanana no mpiara-miasa varotra lehibe indrindra tao Shina tamin'ny telovolana voalohany.
Ny varotra ivelany nataon'i Shina niaraka tamin'ny ASEAN dia nahatratra 3,38 trillion yuan, fiakarana 7,7 isan-jato, ho 14,6 isan-jaton'ny laharam-pahamehan'ny varotra any ivelany tao anatin'ny sivy volana voalohany.
Ny varotra niaraka tamin'ny Vondrona eropeana dia nanampy hatramin'ny 3,23 trillion yuan, tafakatra 2,9 isan-jato, nahatonga ny mpiara-miombon'antoka faharoa amin'ny varotra Eoropeana China. Ny varotra sinoa niaraka tamin'i Etazonia dia nihena indray avy eo amin'ny fihenan'ny teo aloha, miaraka amin'ny salan'isa miakatra 2 isan-jato hatramin'ny 2,82 trillion yuan nandritra izay fotoana izay.
Ny varotra amin'ireo firenena manamorona ny Belt and Road, nandritra izany fotoana izany dia nitombo 1,5 isan-jato ka lasa 6,75 trillion yuan.
Ny ladoany dia nanasongadina ny fitomboana haingana amin'ny varotra vahiny ataon'ny orinasa tsy miankina. Nandritra ny telovolana telo voalohany tamin'ity taona ity dia 10,66 trillion yuan no natolotray ho an'ny fanondranana sy ny fanafarana an'i Shina, izany hoe ny 10,2 isan-jato isan-taona, mitentina 46,1 isanjaton'ny sanda ara-barotra any ivelany izay 4 isanjato isanjato avo kokoa noho io ihany. vanim-potoana tamin'ny taon-dasa.
Amin'ity totalina ity, ny orinasa tsy miankina dia namoaka fanondranana 7,02 trillion yuan tamin'ny ankapobeny, fiakarana 10 isan-jato, mitentina 55,2 isan-jaton'ny salan'isan'ny fanondranana any Chine, raha nitombo 10,5 isan-jato kosa ny fanafarana ho 3,64 trillion yuan, 35 isan-jaton'ny lohatenim-panafarana.
Nandritra io vanim-potoana io ihany, ireo orinasam-bola vahiny dia nandray anjara tamin'ny fanafarana sy fanondranana 8,91 trillion yuan, mitentina 38,5 isan-jato. Ny fanafarana sy fanondranan'ny orinasam-panjakana dia nahatratra 3,46 trillion yuan ka hatramin'ny 15 isan-jaton'ny totaliny.
Ny firafitry ny lamina varotra dia nohavaozina hatrany, miaraka amin'ny salan'isa ny varotra ankapobeny amin'ny varotra ivelany amin'ny firenena mitombo lehibe, hoy i Li.
Tao anatin'ny sivy volana voalohany, ny varotra ankapobeny ao Shina dia nitombo 2,1 isan-jato hatramin'ny 8.55 trillion yuan, mitentina 60,2 isan-jato amin'ny totalim-bidy sy entana any ivelany izay 0,8 isan-jato no ambony noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Raha eo amin'ny sehatry ny indostria dia vita tsara ny fanondranana fitaovana fisorohana ny areti-mandringana, solosaina finday ary fitaovana ao an-trano, noho ny fiovan'ny fomba fiainana nentin'ny valanaretina.
"Ny fanombohana ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa vaovao sy ny fangatahana gadget avy any an-trano dia nampiroborobo ny fanafarana sy ny tsingerin'ny vokatra", hoy i Betty Wang, mpahay toekarena sinoa ao amin'ny Australia sy New Zealand Banking Group.
Nomura's Lu mino fa ny fangatahana solosaina finday dia mety hijanona mandritra ny roa volana, "satria iray amin'ireo singa ilaina amin'ny fianarana an-tserasera io, na dia mety hihamalemy aza ny heriny rehefa mazoto ny fangatahana any an-tsekoly."
Marihina ihany koa, ny fanondranana fanafody sy zava-mahadomelina dia nitsambikina 21,8 isan-jato, raha 48,2 isan-jato kosa ny fitaovam-pitsaboana sy fitaovana.